कसरी प्राप्त Bitcoin डेबिट कार्ड (CRYPTOPAY)
Alisa अक्टोबर 25, 20170टिप्पणीहरू
यदि यो Bitcoin डेबिट कार्ड साँच्चै अवस्थित र म स्पष्ट हो जवाफ दिन सक्नुहुन्छ सोच हामी धेरै. त्यसैले तपाईं आफ्नो Bitcoin डेबिट कार्ड प्राप्त गर्न चाहन्छु, यदि तपाईं यस साइट मा दर्ता गर्न आवश्यक: CRYPTOPAY. दर्ता प्रक्रिया धेरै सरल छ मलाई थाहा छ तिमी मेरो सहायता बिना यो गर्न सक्नुहुन्छ. खाता4मुद्रा एकपटक तपाईंले cryptopay तपाईं आफ्नो खाता मा देख्ने सामेल4आफ्नो ड्यासबोर्डमा मुद्रा खाता. खाता यूरो खाता ब्रिटिश पाउन्ड खाता अमेरिकी डलर खाता यो तल Bitcoin4मुद्रा तपाईं खाताहरू थप पढ्नुहोस् [...]
पैसा कमाउन, विशेष, थप, समाचार
एसईओ लागि शीर्षकहरु कसरी महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ?
Alisa अक्टोबर 24, 20170टिप्पणीहरू
ट्याग शीर्षक छ सिर्जना शीर्षक को प्रयोग भएको एक ट्याग. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्याग छ <H1> र जस्तो वर्गीकरणका तल जान्छ पछि <H2>,<h3> गर्न <h6>. हामी सिर्फ यो पोस्ट लेख्न हुनु आवश्यक छ. कारण शीर्षकहरू र तिनीहरूले महत्व बारे प्रश्न र चासो को धेरै छ. समय प्रयोगकर्ता को सबै भन्दा वास्तवमा कसरी वेबसाइटमा शीर्षक सेटअप परिवर्तन गर्न थाहा थिएन. त्यसैले यो ट्याग आफ्नो वेबसाइट कसरी संरचना गर्न सक्नुहुन्छ दुई तरिकामा छ. हुन क्लासिक HTML बस आवश्यक पर्दैन <H1> ट्याग थप पढ्नुहोस् [...]
थप, समाचार, एसईओ
Alisa अक्टोबर 15, 20170टिप्पणीहरू
हामी सबै Android सबैभन्दा रोचक ओएस छ भनेर थाहा रूपमा(अपरेटिङ सिस्टम) फोन र ट्याब्लेटको लागि. विश्वका ठ्याक्कै Android फोन वा ट्याब्लेट छ कि धेरै प्रयोगकर्ताहरू छ. तपाईँको फोन ब्याट्री कम हुन्छ त्यसैले तपाईं यो सबै कष्टप्रद समय थाहा. हो ब्याट्री खपत नवीनतम र वास्तवमा सबै भन्दा ठूलो स्मार्टफोन अब समस्या छ. र हामी सबै यो रुचि छैन. कहिलेकाहीं हामी हाम्रो फोन चार्ज गर्न आवश्यक2-3एक वा बढी दिनमा पटक हामी खेल हामी मनपर्ने प्ले यदि. तपाईं अझै पनि आधारभूत ब्याट्री बचत कार्य पायो थप पढ्नुहोस् [...]
Alisa अक्टोबर 12, 20170टिप्पणीहरू
सन्देश बूस्टर अनुप्रयोगले बस धेरै सन्देश अनुप्रयोगहरू ह्यान्डल गर्ने गर्न थकित महसुस र तपाईं सन्देश बूस्टर आवश्यक भन्दा कसैले जवाफ आफ्नो खेल रोक्न आवश्यक पीसी मा. Android सन्देश बूस्टर अनुप्रयोगको साथ सजिलै आफ्नो गरिरहेका छन् के यो साँच्चै स्क्रिन जवाफ मदत गर्छ कारण बन्द स्विच बिना ध्यान वा खेल रोक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं सन्देश बूस्टर अनुप्रयोगबाट अधिक उत्पादक तपाईं साँच्चै तपाईं गरिरहेका छन् के ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ कारण हुन र एउटै स्क्रिनबाट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ. मैले पाए 10 सबै भन्दा लोकप्रिय सन्देश थप पढ्नुहोस् [...]
डाउनलोड LUDO स्टार स्थापना: Ludo कहिल्यै स्मार्टफोन खेल इतिहासको उत्पादन कि सबै भन्दा लोकप्रिय बोर्ड खेल छ. यो सिर्फ पाकिस्तान जस्तै एशिया देशहरूमा धेरै अत्यधिक लोकप्रिय छ, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश र आदि. सबै उमेर समूह मान्छे को लागि बनाएको छ कि यस खेलको लागि सबै भन्दा ठूलो अपील को एक र यो साँच्चै रमाइलो छ. तपाईं कुनै पनि समयमा यो खेल खेल्न सक्छन्. हालै एक नयाँ Ludo तारा 2017 Android खेल जारी. कारण यो खेल को लोकप्रियता गर्न यो अनुप्रयोग धेरै प्रसिद्ध भए र विशाल हिट पायो थप पढ्नुहोस् [...]
शीर्ष 20+ गुगल एड्सेन्स लागि उच्च सीपीसी कीवर्ड Paying 2017
Alisa अक्टोबर 11, 20170टिप्पणीहरू
Google Adsense Google Adsense तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट पैसा उत्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो मुद्रीकरण नेटवर्क छ. आफ्नो साइट राम्रो यातायात छ भने तपाईं आफ्नो पोस्ट मा प्रयोग गरेर Google Adsense सीपीसी किवर्ड प्रयोग गरेर राम्रो नगद कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दा. Google Adsense मा स्थापित छ 2003 र सबै भन्दा लोकप्रिय र उपयुक्त मुद्रीकरण नेटवर्क हुन्छ. यो विज्ञापन तपाईँको पोस्ट मा अवस्थित किवर्ड को संयन्त्र मा अल्गोरिदम काम सेवा छ. मलाई तपाईं यो व्याख्या गरौं. तपाईँले वेब सम्बन्धित छ भनेर एउटा ब्लग वा वेबसाइट पोस्ट छ भने त थप पढ्नुहोस् [...]